पेशों को संरक्षक सन्तहरू को Pleading प्रार्थना
अर्थोडक्स मानिस कुनै पनि व्यापार एक प्रार्थना साथ सुरु हुन्छ। मात्र परमेश्वरको मदत पाएर तपाईं खतराहरूबाट बच्न लागि, श्रम प्रक्रियामा सामना कठिनाइको र अवरोध हटाउन सक्नुहुन्छ र सफलतापूर्वक काम समाप्त।
काम मा प्रार्थना शब्दहरू सुरु "मलाई सहयोग, प्रभु!" विशेष गरी यो अनुरोध तुरून्त गाह्रो उपयुक्त रोजगार पाउन गर्दा आवश्यक र काम मान्छे आफ्नो परिवारको खुवाउन आवश्यक छ।
पार्थिव जीवन एउटा analogy चित्रकला, विश्वासीहरूलाई ठेगाना subconsciously परमेश्वरको सानो समस्या द्वारा विचलित हुनुपर्छ भन्ने महसुस, र केवल विशेष को अवस्थामा यसलाई बुझाउँछ। दैनिक जरुरी अनुरोध नियम, रूप, सम्बोधन संरक्षक सन्तहरू। काम मा प्रार्थना दैनिक recourse स्वर्गीय शक्तिहरु गर्न भन्छिन्।
यो सन्तहरू (शहीदहरूको, सन्तहरू, अगमवक्ताहरू) आफ्नो जीवनकालमा साधारण मान्छे थिए कि सम्झना गर्नुपर्छ, तिनीहरूको विश्वास अन्य मात्र प्रतिरोध फरक, अरूसित व्यवहार गर्दा gentleness, मसीही विश्वास, साहस र अन्य सद्गुण को शत्रुहरूको intransigence। तिनीहरूले सधैं, पार्थिव मानिस बुझ्न को कमजोरी क्षमा र उहाँको मदत।
यो सन्तहरू, यो जीवन मा केही क्षेत्र मा बस्नुहुन्थ्यो आफ्नो सहकर्मी मदत विश्वास छ। त्यसैले, सेन्ट पीटर गर्दा प्रशस्त क्याच माग्दै उहाँले सम्बोधन गरिएको छ, एक मछुवा थियो। शिकारी र प्रार्थना सेन्ट पीटर, गर्न र आफ्नो भाइ अन्द्रियास। Panteleimon को चिकित्सा डाक्टर मद्दत गर्छ, त्यो विभिन्न रोगबाट पीडित मान्छे कसरी उपचार गर्न थाह थियो। धार्मिक Procopius विशेष आधुनिक बिक्री प्रबन्धकहरू मा, व्यापार मा कमाउन गर्नेहरूलाई मद्दत गर्छ। सेन्ट जोसेफ कालिगढहरु मदत गर्नेछ र Aleksiy Moskovsky - को बिल्डर्स।
परमेश्वर, हाम्रो देश को स्वर्गीय patroness, सधैं विशेष गरी रूस मा revered को आमा, यो अक्सर काम र प्रार्थना बुझाउँछ। एउटा महत्त्वपूर्ण संरक्षक र predstatel प्रभु अघि, र उहाँले जसको नाम ख्रीष्ट अर्थोडक्स मा बप्तिस्मा एक सेन्ट छ। नाम क्यालेन्डर देखा गर्दैन भने, यो तपाईं चर्च पात्रोमा हेर्न र जसको नाम दिन मेरो जन्मदिन मा पतन निर्धारण गर्न सक्छन्, फरक छैन।
तपाईं प्रार्थना गर्ने acquisitive वर्ण छ र यो सामाग्री सामान मात्र पछि लाग्नुलाई देखिन्छ मान हुँदैन। एक मानिस उहाँले रुचि र परमेश्वरको प्रसन्न, यो आनन्द के गर्छ। embittered loafer विपरीत, यो प्रियजनहरूलाई र समुदायको फाइदा हुन्छ। काम गर्न इच्छा साँचो मसीही विश्वासीले कमाउन इच्छा गर्ने distinguishes उनीहरूको दैनिक रोटी आफ्नो ब्रो को पसिना द्वारा। स्वर्गदूतहरू आफ्नो चुनिएको क्षेत्रमा आफ्नो सफलता आनन्द गर।
लगभग हरेक घर चित्रण गरिएको एउटा रूसी प्रतिमा, छ Nikolai Ugodnik। प्रार्थना काम मा जो सबैभन्दा खतरनाक छ, फरक पेशों एक मान्छे उसलाई ल्याउँछ। यो पवित्र नाभिकहरु (Myra को सेन्ट निकोलस, को Wonderworker पनि mariners सहायता), पाइलटहरूले, र अन्तरिक्ष यात्री बारी, तर तिनीहरू सबै कार्यकर्ता द्वारा सुने गरिनेछ।
रचनात्मक पेशों प्रतिनिधिको प्रेरणा बारेमा छ (लूका कलाकारहरूको patronizes) मन र आत्मा बलियो बनाउन आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। मजदुर शारीरिक शारीरिक बल, तर आवश्यकता हो, र यो चोट र अनावश्यक जटिलता जोगिन सल्लाह आवश्यक छ।
तपाईं प्रार्थना पुस्तक को प्रमाणिक पदहरू लागि प्रार्थना वा आफ्नै शब्दमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा विशेष चाहेको स्थिति र तलब लागि प्रार्थना अनुरोध पाठ समावेश हुँदैन हुन, उहाँको ठूलो बुद्धि परमेश्वरको सधैं उहाँले के चाहन्छ मानिस दिन छैन, तर यो के आवश्यक प्राप्त हुनेछ। अवैध अभिव्यक्ति वा "प्रभु, मलाई सामान्य निर्देशक को स्थिति दिन" "तलब को कृपया पाँच हजार डलर।" यो एक petitioner यी उपहार लागि तयार छैन सम्भव छ। यो नम्र भई धैर्य, लगनशीलता इच्छा र परमेश्वरको इनाम दिनु सबै स्वीकार गर्न तत्परता व्यक्त गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। पाप क्षमा गर्न publican अनुरोध को प्रार्थना मा, आफ्नै पापले एक जागरूकता संग संयुक्त। यो भवदीय उच्चारण गरिएको छ भने, कुनै संदेह छैन, लक्ष्य हासिल हुनेछ।
काम राम्रो-भएकोमा प्रार्थना आवश्यक हृदय सुख अनुरोध पनि समावेश छ। मन एक निर्मल राज्य गठन कुनै पनि व्यापार, बरु क्रोध र तीता सिद्ध भन्दा सफल।
हो, राम्रो Undertakings रूसी देशमा सबै सन्तहरू चमक हुनेछ मदत!
पवित्र Apostol Filipp। प्रेरित फिलिप को जीवन
पवित्र पानी चमत्कार गुण
ओडेसा Diocese: आध्यात्मिक पुनरुद्धार
अस्थायी छुट्टी: इस्टर एक नम्बर?
हराएको र revives मुक्तिदाता गिरजाघर (पेन्जा)
बाँझोपन लागि बच्चा को जन्म लागि प्रार्थना
नोटबुक समीक्षा ASUS K52JC
यस संघ परिषद को शक्तिहरु
HUAWEI आदर 7: सिंहावलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
वजन लागि आहार खाद्य पदार्थ: सबै भन्दा राम्रो को सूची
बाहिरु निलय विफलता: कारण, लक्षण, उपचार
विवाद र उनको वर्गीकरण को मुख्य प्रकार
मटर puree कसरी खाना पकाउनु?
"Chlorhexidine" - यो के हो? कसरी पाल्नु र "Chlorhexidine" कसरी लागू गर्ने?
Pyelonephritis लोक उपचार को एक राम्रो उपचार कसरी बनाउने